juillet 2018 - Page 3 sur 91 -
Ambohimanarina : Rongony natsipy avy any anaty taksibe
31/07/2018 admintriatra 0
Mpamily sy reseveran’ny zotra 105 no voalaza fa nanipy rongony iray gony, teny Ambohimanarina no nosamborin’ny polisy, ny harivan’ny zoma lasa teo. Raha ny nambaran’ny avy eo anivon’ny polisy eny an-toerana dia tsy nisy nahafantatra …Tohiny
Analamahitsy : Rangahy hita faty tanaty tanimbary
Lehilahy iray manodidina ny 70 taona no hita faty tanaty tanimbary teny Analamahitsy omaly. Raha ny filazan’ireo nanatri-maso dia olona sendra nandalo no nahatsikaritra ny razana, teny an-toerana. Ity olona nahita izany indray no nampandre …Tohiny
Tsaralalàna : Vola sandoka roa Tapitrisa nisy nanaparitaka
Lehilahy miisa roa mpanakalo vola sandoka no voasambotra ny polisy ny zoma lasa teo. Araka ny nambaran’ny mpitandro filaminana, dia akom-baovao avy amin’ny olon-tsotra no nahafahana nisambotra ireto roalahy nitondra vola sandoka ireto. Vola sandoka …Tohiny
Ady parking : Hametraka fitoriana ny FTAR
Ady parking, nifamotoana teo anoloan’ny hotely Sakamanga ny filohan’ny “taxi de stationnement”, omaly maraina. Entina hanoherana ny zavatra nitranga tamin’ny zoma, izay fanambaniana sy fanaratsiana ny taxi nataon’ny mpitantana ny hotely Sakamanga. Ny zavatra nitranga …Tohiny